किन गर्छन् मानिसले गुदामैथुन? - Everest Dainik - News from Nepal
किन गर्छन् मानिसले गुदामैथुन?
काठमाडौं । हामीले (दम्पती) आपसी सहमतिमा नियमित बिना कण्डम गुदामैथुन गर्दै आएका छौ र विर्य स्खलन पनि मलद्वाराभित्रै हुन्छ । सामान्य स्वास्थ्य स्थितिका बावजुदमा वीर्य मलद्वार भित्र स्खलन गर्दा संक्रमण हुन्छ कि हुँदैन ? उचित जानकारीका साथै सम्भावित संक्रमण तथा सुरक्षाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध छ । एल.
याे पनि पढ्नुस यी हुन् यौनसम्पर्कका बेला भुल्न नहुने कुरा
लिंग ग्रहण गर्ने व्यक्तिले यौन चरमसुख प्राप्त गर्नुलाई Anal orgasm भनिन्छ । अर्कातिर कतिपय व्यक्तिले गर्ने कार्यभन्दा फरक किसिमको कार्य गर्दा एउटा विशेष प्रकारको आनन्द एवं रोमाञ्चता अनुभव गर्छन् । गुदामैथुन गर्दा कुनै वर्जित कार्य गरेको भनी मानसिक रुपमा रोमाञ्चको अनुभव हुन्छ । यो जवाफ डा. भद्राले दिएका हुन् । सामग्री कान्तिपुर साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस कस्तो शैलीमा यौनसम्पर्क गर्दा महिला आनन्द लिन्छन् ? हेर्नुस्
ट्याग्स: Sex news